DOOGEE BL7000 ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - အသွင်အပြင်များ၊ ဈေးနှုန်းနှင့်အခြားအရာများ | Androidsis
ဒီနေ့စက်ပစ္စည်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးထက်ကျော်လွန်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာသွားပါမည်။ DOOGEE မှနောက်ထပ်စမတ်ဖုန်းတစ်ခု, အ DOOGEE BL 7000။ ဘက်ထရီပိုလိုချင်သူတွေအတွက်စမတ်ဖုန်းတစ်မျိုးကိုတီထွင်လိုက်သည်။ သင်၏ဘက်ထရီသက်တမ်းမှာပြproblemsနာများရှိပါကသို့မဟုတ်သင့်အရှိန်အဟုန်ကိုထိန်းနိုင်သည့်လက်ကိုင်ဖုန်းကိုမတွေ့ပါကယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ခိုင်မာသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုအဆိုပြုထားသည်။
DOOGEE BL 7000 တပ်ဆင်ထားသည် ကြီးမားတဲ့ ၇,၀၆၀ mAh ဘက်ထရီတကယ့်ဒေါသ။ ဤစမတ်ဖုန်းမှပေးထားသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ပါကလက်ရှိစျေးကွက်ရှိဘက်ထရီများ၏ပျမ်းမျှစွမ်းရည်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည့်စမတ်ဖုန်းအနည်းငယ်သာရှိသည်။ သို့သော် DOOGEE BL 7000 သည်၎င်း၏ဘက်ထရီကိုသာထင်ရှားစေသည်။
2 DOOGEE BL 7000 သေတ္တာထဲတွင်အဘယ်အရာရှိသနည်း
3 DOOGEE BL 7000 ဒီဇိုင်းနှင့်အပြီးသတ်
4 DOOGEE BL 7000 မျက်နှာပြင်
5 DOOGEE BL 7000“ အင်ဂျင်”၊ စွမ်းအားနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်
6 Android 7.0 နီးပါးသန့်ရှင်းသော
7 Samsung မှလက်မှတ်ထိုးသည့်ဓာတ်ပုံကင်မရာများ
8 DOOGEE BL 7000 ရှိအသံသည်အလွန်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သည်
9 DOOGEE BL 7000 သည်ဘက်ထရီသက်သာသောကြောင့်လား။
10 DOOGEE BL 7000 Datasheet
11 DOOGEE BL 7.000 ၏ကောင်းကွက်နှင့်မွမ်းမံနိုင်စွမ်း
11.1 DOOGEE BL 7000 ၏မျက်နှာသာအတွက်
11.2 အဆိုပါ DOOGEE BL 7000 ဆန့်ကျင်
13 အကောင်းအဆိုး cons
Android အလယ်အလတ်တန်းစားကိုဝင်သော terminal အသစ်အမြောက်အမြားနှင့်အတူနေ့စဉ်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။ စျေးကွက်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာသည့်စမတ်ဖုန်းအသစ်များနှင့်တစ်စုံတစ်ခုပြောင်းလဲနေသည်။ တဖြည်းဖြည်းချင်းအသစ်သောကုမ္ပဏီများသည်ပိုမိုမြင့်မားသောအလယ်အလတ်တန်းစားများအဆင့်နှင့်အရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်နေကြသည်။ ထို့အပြင်အကွာအဝေး၏ထိပ်ဆုံးဟုမယူဆထားသောဆိပ်ကမ်းများပါ ၀ င်သောကဏ္withinတွင်ကြီးမားသောကွဲပြားခြားနားမှုများရှိနေသည်။
ပြီးတော့ဒီကွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေမှာအရည်အသွေးမြင့်မားစေတဲ့ဆိပ်ကမ်းကနေထုတ်ပေးတယ်။ ပို၍ ဂရုစိုက်သောဒီဇိုင်းများ၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောသတ္တုစပ်များ၊ ဖန်သားရေနှင့်ရောနှောထားသောအရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများတည်ဆောက်ခြင်း။ ပြီးတော့သူ့ရဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်တွေကသုံးဆပိုမြင့်တဲ့စျေးနှုန်းတွေရှိတဲ့ဖုန်းတွေကိုမနာလို ၀ န်တိုစရာပဲ။
ကုမ္ပဏီကြီးတွေကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုမကြောက်ပါဘူး။ အများဆုံးပရီမီယံထုတ်ကုန်များအတွက်စားသုံးသူအမြဲရှိလိမ့်မည်။ သို့သော်စျေးကွက်လေ့လာမှုကိုလေ့လာပြီးနောက် Samsung သို့မဟုတ် Apple ထက်ကျော်လွန်သောဘ ၀ ရှိသည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသောဖောက်သည်များစွာရှိသည်။ အရည်အသွေးမြင့်ဖုန်းများဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုခံစားရန်အတွက်သင်ကံမကောင်းစရာမလိုပါ။
Doogeeအခြားလက်မှတ်ထိုးမှုများနှင့်အတူဖြစ်သည် အလယ်အလတ်တန်းစားအတွက်တာ ၀ န်ယူသူတစ် ဦး သည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်နည်းပြီးလျော့နည်းသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောစမတ်ဖုန်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့်သူတို့သည်အခြားကျော်ကြားသောဖုန်းများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးကွက်ကိုအခြားနည်းလမ်းများဖြင့်ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ပြီးတော့သူတို့ဟာနည်းနည်းလေးအတွက်အများကြီးကမ်းလှမ်းခြင်းအားဖြင့်လူထုရဲ့အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။
DOOGEE BL 7000 သေတ္တာထဲတွင်အဘယ်အရာရှိသနည်း
DOOGEE BL 7000 သည်လာသည် Matte အနက်ရောင်သေတ္တာ။ ရိုးရှင်းသောမရှိဘဲကြော့ထုပ်ပိုး။ ၎င်း၏အထက်ပိုင်းတွင်၊ တောက်ပသောအနက်ရောင်အက္ခရာများတွင်အမှတ်တံဆိပ်၏တံဆိပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ ထိုအခါအောက်ခြေမှာကိရိယာ၏မော်ဒယ်။ အတွင်းပိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမ ဦး ဆုံးဥပမာအားဖြင့်, device ကိုသူ့ဟာသူရှာပါ။ ဖယ်ရှားသည့်အခါ၎င်း၏အလေးချိန်သည်များစွာသောအာရုံကိုဆွဲဆောင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အချိန်ကြာမြင့်စွာကျွန်ုပ်လက်၌ရှိခဲ့သမျှအခက်ခဲဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်နိုင်သည်။
အလေးချိန်သည်အာရုံကိုဆွဲဆောင်သောအရာဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်၎င်း၏ကြီးမားသောဘက်ထရီကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းမကြာမီကျွန်ုပ်တို့နားလည်လာသည်။ အချို့သူများအတွက် terminal တစ်ခုသည်လေးလံသောကြောင့်ပုံမှန်ထက်ပိုမိုသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုလဲလှယ်ရန်အလွန်ဆိုးသောခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ညဘက်တွင်သူတို့၏စမတ်ဖုန်းကိုအလိုအလျောက်အားသွင်းသည့်အခြားသူများအတွက်မူအလေးချိန်သည်မကျော်လွှားနိုင်သောအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
box ၏ content နှင့်အတူဆက်လက်ကျနော်တို့ပုံမှန်ဖြစ်လာမှစတင်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုမြင်, ငါတို့ကြိုက်တယ်။ DOOGEE BL 7000 တွင်ပါဝင်သည် ဖန်ထည်နှင့် silicone လက်နှင့်အတူ သင့်ကိုလက်အိတ်လိုကိုက်ညီစေတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းအသစ်၏ပထမဆုံးကာကွယ်မှုမှာထုတ်လုပ်သူ၏တာ ၀ န်ဖြစ်ပြီးအမြဲတမ်းတန်ဖိုးထားရမည့်အရာ။
ဟုတ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်လည်းပါရှိသည် အားသွင်းခြင်းနှင့်ဒေတာလွှဲပြောင်းခြင်းအတွက် USB ကြိုး။ အဆိုပါ plug ကိုသို့မဟုတ် နံရံမှ cable ကို connector ကို ဥရောပပုံစံနှင့်အတူ။ နှစ် ဦး စလုံးအနက်ရောင်ထဲမှာငါတို့ရှိသည် device ကိုအရသိရသည်။ The ကဒ်အထိုင်ဖယ်ရှားပစ်ရန် pin ကို။ ထိုအခါဂန္ အမြန်စတင်လမ်းညွှန် အတူတူသက်ဆိုင်ရာ အာမခံစာရွက်စာတမ်းများ.
ကျနော်တို့တွေ့မြင်အထက်ပါအပြင် ရှားပါးဆက်စပ်ပစ္စည်း။ box အတွင်းပိုင်းထည့်သွင်းထားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းကိုပြင်ပဘက်ထရီအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်စေရန်အတွက်အသုံးပြုမည့်ကေဘယ်တစ်ခု အခြားပစ္စည်းများကိုအားသွင်းနိုင်ခြင်း။ ၎င်း၏ 7.060 mAh ဘက်ထရီသည်သင့်အားအခြားပစ္စည်းတစ်ခုအားအပြည့်အ ၀ အားသွင်းရန်ပေးသည် နေဆဲနှမြောဖို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်အတူဆက်လက်။
အမှုန်များနှင့်ဖန်ထည်များထည့်သွင်းခြင်းသည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အရာကောင်းသည်။ လက်မှတ်ထိုးထားသောနားကြပ်များမထည့်ရန်လည်းကျွန်ုပ်တို့မှားသည်။ တဖကျတှငျကြှနျုပျတို့သညျ၎င်းငျးသညျကုန်ကျစရိတ်မြားကိုချွေတာသညျ့နညျးလမျးမြားနှငျ့ပိုမိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနားလည်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်သူကစမတ်ဖုန်းအသစ်ကိုသူ့ရဲ့သံခမောက်အသစ်တွေနဲ့ထုတ်ဝေတာကိုအမြဲတမ်းနှစ်သက်တယ်။ များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နားကြပ်အသစ်များအတွက်လဲလှယ်ပေးသည့်အဖုံးနှင့်ဖန်ခွက်များကိုစွန့်လွှတ်ရန်ပင်ဆန္ဒရှိလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သာပြောနိုင်သည် ကျွန်ုပ်တို့နားကြပ်အချို့ကိုလက်လွတ်လိုက်ရသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း DOOGEE မှထုတ်ကုန်အသစ်များတပ်ဆင်ထားသောအကာအကွယ်များကိုတန်ဖိုးထားသည်။ ကျန်အစိတ်အပိုင်းများမှာလုံလောက်ပြီးအရည်အသွေးရှိသောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပုံရသည်။
DOOGEE BL 7000 ဒီဇိုင်းနှင့်အပြီးသတ်
ဒီဇိုင်းရှုထောင့်တွင် DOOGEE သည်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည့်ကုမ္ပဏီများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်သောအလုပ်အပေါ် အခြေခံ၍ အလွန်ထင်ရှားသောရလဒ်များကိုရရှိသည်။ ထို့အပြင်၎င်းကိုလိုင်းများ၊ အပြီးသတ်မှုများနှင့်အောင်မြင်သောပစ္စည်းများပေါင်းစပ်မှုများကြောင့်ရုပ်ရည်အသွင်အပြင်ကောင်းမွန်သည့်ဖုန်းများဖန်တီးရန်အတွက်လက်ရှိတွင်အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။
DOOGEE BL 7000 သည်ဝေးကွာ။ ဝေးလွန်းသည်။ ငါတို့အရင် သတ္တုဘောင်များနှင့်အတူတစ် ဦး ကိုယ်ထည်အပေါ်တည်ဆောက် terminal တစ်ခု အလွန်အောင်မြင်သောချောနှင့်အတူ။ ၎င်း၏ရှေ့မှောက်၌ကျွန်တော်တစ် ဦး ရှိသည် 5,5 လက်မနှင့်အတူမျက်နှာပြင်။ ထိပ်ဆုံးမှာဘယ်ဘက်မှာတွေ့နိုင်တယ် selfie flashပိုပိုပြီးဖြစ်လာပြီးငါတို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာ။
ရှေ့မီးနောက်ဘေးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှာပါ Proximity အာရုံခံကိရိယာ၊ စပီကာနှင့်ဓာတ်ပုံကင်မရာ။ ပြီးတော့မျက်နှာပြင်ရဲ့အောက်ခြေမှာကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ် ပုံသေအိမ်ခလုတ်။ ၎င်းသည်သွားလာလှုပ်ရှားမှု (သို့) တုန်ခါမှုရှိတဲ့ခလုတ်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းသည် touch ခလုတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး fingerprint reader ကိုပါပေါင်းစပ်ပြီး၎င်းသည်ရှေ့ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ ကျနော့်အမြင်ကတော့နောက်ဖုန်းလက်ဗွေဖတ်စက်ကိုသုံးပြီးဒီပစ္စည်းတွေဟာအသင့်တော်ဆုံးနဲ့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။
ငါကြုံတွေ့ခဲ့ရသည် လက်ဗွေအသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်အတူအချို့သောပြproblemsနာများ ငါမကြာမီဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့လက်ဗွေ။ မအောင်မြင်နိုင်သည့်လှည့်ကွက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ခြေရာကိုထွင်းသောအခါကျွန်ုပ်တို့လက်ကိုထားပုံဖြစ်သည်။ စမတ်ဖုန်းကိုကိုင်နေချိန်မှာကျွန်ုပ်တို့ကလက်ဗွေရာကိုသဘာဝကျကျထားရမယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ဗွေကိုဖြောင့်သောလက်ဖြင့်ထားလျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမှန်ကန်စွာဖတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက်၊ ဖုန်းကိုလက်တစ်လုံးဖြင့်ကိုင်ထားပြီးအခြားတစ်ဖက်၏လက်ဗွေကိုထားရမည်။
၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ဗွေဖတ်ခြင်းကိုရှေ့တွင်ထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှာတွေ့နိုင်သည့် "အားနည်းချက်များ" ဖြစ်သည်။ စာဖတ်သူသည်စက်၏နောက်ဖက်တွင်တည်ရှိသောကြောင့်စျေးကွက်သည်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်။ ကျနော်တို့သဘာဝကျကျလက်ညှိုးကိုထောက်ခံရှိရာဘယ်နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် DOOGEE BL 7000 ပါသောလက်ဗွေဖတ်စက်သည်၎င်း၏မြန်နှုန်းနှင့်တိကျမှုအတွက်ထင်ရှားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
capacitors ခလုတ် Multi-tasking အတွက် "back" နှင့် "back" တို့သည်မူလနေရာ၏အလယ်ခလုတ်၏အဆုံးမှာရှိသည်။ သူတို့ဆီမှာနောက်ခံအလင်းမရှိကြပါ, ထိုသူတို့သာသေးငယ်တဲ့အဖြူအစက်နှင့်အတူမှတ်သားနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုစီသည်မည်သည့်အရာနှင့်ကိုက်ညီသည်ကိုစစ်ဆေးရမည်။ အမှန်မှာသူတို့သည်လုံးဝအနက်ရောင်ဘောင်ပေါ်တွင်ကောင်းသောပုံပေါက်ခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သည့်လိုဂိုသို့မဟုတ်မြှားဖြင့်မဆိုဖုန်းလိုင်းကိုပြုလုပ်ခြင်း
ထဲမှာ ထိပ်ဆုံး ဖုန်းကိုသာရှာပါ အသေးစားဆိပ်ကမ်း နားကြပ်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်။
ယင်း၏အတွက် အောက်ခြေ ငါတို့တွေ့တယ် အလယ်ဗဟိုမှာ USB connector ကို အားသွင်းခြင်းနှင့်ဒေတာလွှဲပြောင်းသည်။ သင့်ရဲ့ဘယ်ဘက်စပီကာနှင့်ညာဘက်ညာဘက်မိုက်ကရိုဖုန်း။ ပထမတစ်ချက်မှာပေမယ့် DOOGEE BL 7000 တွင်နှစ်ဆစပီကာရှိပြီး၎င်းသည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်း၏ဒီဇိုင်နာများကမိုက်ခရိုဖုန်းအပိုင်းကိုစပီကာအစိတ်အပိုင်းကဲ့သို့အပေါက်များနှင့်အတူတပ်ဆင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဒုတိယစပီကာမပါ ၀ င်သည့်အတွက်အနည်းငယ်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသော်လည်းဗေဒအဆင့်တွင်ရရှိသောရလဒ်သည်ကောင်းမွန်ပြီးအဆုံးသတ်ရာတွင်သဟဇာတဖြစ်စေသည်။
el en ညာဘက်ခြမ်းမှာ SIM သို့မဟုတ် SD ကဒ်များထည့်သွင်းရန်အတွက် slot ရှိသည်။ အဆိုပါများအတွက်တစ်ခုတည်း elongated ခလုတ်ကို အသံအတိုးအကျယ်ထိန်းချုပ်မှု။ ပြီးနောက် start နှင့်ပါဝါခလုတ်ကို ဂိတ်။
ယင်း၏အတွက် နောက်ဘက်ကင်မရာကိုတွေ့ပြီ ဤကိစ္စတွင် DOOGEE သည်လောင်းကစားတစ်ခုအတွက်လောင်းနိုင်သည် ကင်မရာနှစ်လုံး။ သူတို့၏ မှန်ဘီလူးဒေါင်လိုက်ကို LED flash ကိုအဘို့ထိုသူတို့အကြားအာကာသအောင်နေရာချထားပါသည်။ ကြည့်ရှုရန်ရုပ်ဆိုးမဟုတ်တစ် ဦး ကဒီကဗျာဖွဲ့စည်းမှု။
ကိုယ်ထိလက်ရောက်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ၏ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း နောက်ဘက်ရှိအရေပြားကိုတုပသည့်ပစ္စည်း သင်တစ် ဦး ပုံမှန်ကြည့်ပေးသည်။ ဒါ့အပြင် ကိရိယာကိုကောင်းကောင်းချုပ်ကိုင်ထားပါ နှင့်အတူကချော်၏ခံစားမှုမပေးပါဘူး။ သတိပြုသင့်သည်မှာ DOOGEE BL 7000 ၏အလေးချိန်သည်စမတ်ဖုန်းကိုင်ထားစဉ်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားသည့်ပမာဏထက်များစွာပိုသည်။ ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ဘက်ထရီကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့လုံးဝနားလည်နိုင်ပါတယ်။
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲဒီဇိုင်းပညာရှင် DOOGEE ကအလုပ်ကောင်းကောင်းဆက်လုပ်နေတယ်။ BL 7000 သည်သူတို့တွင်နယ်ပယ်တစ်ခုကိုထွင်းဖောက်နိုင်ခဲ့သည် ပိုကောင်းတဲ့လက်စလယ်ပိုင်းအကွာအဝေးဖုန်းများ။ ကျောဘက်၌သတ္တုပစ္စည်းချောမရှိသော်လည်း၎င်းသည်အလွန်လေးလံသောဖုန်းအတွက်အကောင်းဆုံးဆုပ်ကိုင်မှုကိုပေးနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်လက်ဗွေအစွန်းအထင်းများပြaနာရှိတော့မည်မဟုတ်။
DOOGEE BL 7000 မျက်နှာပြင်
DOOGEE BL 7000 မျက်နှာပြင်သည်အခြားဒြပ်စင်တစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ နှင့် ၅ လက်မအရွယ်အစား နှင့် 1920 x 1080 pixel resolution။ သင်၏နည်းပညာ က IPS သငျသညျတကယ်ကောင်းသောအရောင်အရည်အသွေးကိုပေးထားပါတယ်။ အချို့အပြင် မင်္ဂလာပါ ကြည့်ရှုထောင့် စုံလင်ခြင်းအပေါ်နယ်စပ်။ panel တစ်ခု Sharp ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သည် ကြောင်းသက်သေပြထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးသေချာ။ ၎င်း၏ resolution နှင့်အရောင်များ၏ကြည်လင်ပြတ်သားမှုသည်၎င်း၏တိုက်ရိုက်ပြိုင်ဘက်များထက်များစွာသာလွန်သည်။
၏လျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုခြင်း AnTuTu Benchmark လုပ်ဖို့ စမ်းသပ် ပြီးတော့ panel ကိုစမ်းသပ်ကြည့်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရလဒ်များရရှိသည်။ ထိတွေ့တုံ့ပြန်မှုနှင့်မျက်နှာပြင် sensitivity သည်မြန်ပြီးတိကျသည်။ ငါတို့သည်အဘယ်သို့ဖွင့်ထားပါတယ်ကြည့်ပါ 10 Multi-touch အချက်များ။ ကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့သောအခြားစမတ်ဖုန်းများတွင် Multi-touch အချက်များပျမ်းမျှလေးခုထက်မပိုပါ။ မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံသည်အလွန်ကောင်းရန်လိုအပ်သည်ထက်များစွာပိုသည်။
အရွယ်အစားနှင့်ပတ်သက်။ ၎င်း၏သတိပြုပါ ၅.၅ လက်မကလုံလောက်ပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးအကြောင်းအရာများကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တူညီသောအကွာအဝေး၏အခြားဆိပ်ကမ်းမြင်ကြပေမယ့် panel ကိုအနည်းငယ်ပိုညှစ်နိုင်ဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျနော်တို့စဉ်းစားပါ လမ်းညွှန်ခလုတ်များမျက်နှာပြင်ပိတ်နေသောမျက်နှာသာအတွက်အချက် ထို့အပြင် home button သည်ထိတွေ့နိုင်သောတစ်ခုတည်းသောခလုတ်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်စမတ်ဖုန်းလိုင်းအားထူးခြားသောပုံရိပ်တစ်ခုပေးသည်။
DOOGEE BL 7000“ အင်ဂျင်”၊ စွမ်းအားနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်
DOOGEE BL 7000 သည်မကြာသေးမီကအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ပရိုဆက်ဆာများတပ်ဆင်ထားသည်။ ဒါဆိုရင်, ကျနော်တို့က MediaTek MT6750T ရှိသည်။ တစ် ဦး က Processor ကို octa-core cortex-A53 သူတို့ပြေးကြ 1,5 GHz မှာ။ ပြီးတော့ Mali-T860 GPU ကို။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ငါတို့ပိုပြီးအစွမ်းထက်စဉ်းစားပရိုဆက်ဆာကိုငါသိ၏။ သို့သော် DOOGEE သည်ဤကိစ္စတွင်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသေချာစွာသက်သေပြသည့်ပရိုဆက်ဆာတစ်ခုကိုရွေးချယ်သည်။
တကယ်တော့, Huawei ကဲ့သို့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, သင်၏ Honor 6C Pro မော်ဒယ်နှင့်အတူသို့မဟုတ် Honor V9 နှင့်အတူ။ Meizu အခြားသူများအကြား၎င်း၏ M5, M6, U10 သို့မဟုတ် M3 မော်ဒယ်များနှင့်အတူ။ LG 10 မှ၎င်း၏ K2.017 မော်ဒယ်နှင့်နှင့် X ကိုပါဝါအတူ။ Asus၊ Oppo, Vernee သို့မဟုတ် Oukitel စသည့်အခြားကုမ္ပဏီများနှင့်အခြားအရာများစွာလည်းရှိသည် သူတို့ကယုံကြည်စိတ်ချရသောချစ်ပ်မှပေးထားသောလုံခြုံရေးအတွက်လောင်းသည်.
MediaTek MT6750T လည်းဖြစ်သည် အရည်အချင်းပြည့်ဝမှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အကြားအကောင်းဆုံးမျှတမှုကိုပေးသည့်ပရိုဆက်ဆာများထဲမှတစ်ခု။ မည်သည့်ရှုထောင့်မှမကျရောက်နိုင်သည့်တစ်ချိန်တည်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘက်ထရီကိုအချည်းနှီးဖြစ်စေမည်မဟုတ်သောချစ်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မည်သည့်လုပ်ငန်းကိုမဆိုလုပ်ရန်စွမ်းအားမရှိခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့သတိမပြုမိပါ။ ဤရွေ့ကား, ဒီပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူပါသော RAM နှင့် ROM ကိုအမှတ်တရများကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤသတ်မှတ်ချက်များရှိသောအလယ်အလတ်တန်းစားတွင်စမတ်ဖုန်းကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲသည်။ DOOGEE BL 7000 အင်္ဂါရပ်များ4GB RAM မှတ်ဉာဏ်။ 100% ကျော်စျေးနှုန်းထက်ကျော်လွန်သောစမတ်ဖုန်းများထည့်သွင်းမထားကြဘူး။ သင့်အတွက်လည်းအလားတူပဲ သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်။ ကြှနျုပျတို့မှာ ... ရှိသညျ 64 GB ကို ကြောင်းလုံးဝလုံလောက်ပုံရသည်စတင်။ သို့သော်အဘယ်သို့နေဆဲ ငါတို့ချဲ့လို့ရတယ် မှတ်ဉာဏ်ကဒ်နှင့်အတူ 256 GB အထိရနိုင်သည်.
ထိုကဲ့သို့သော "မော်တာ" နှင့်အတူကဒီ DOOGEE BL 7000 မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်အရည်ပျော်ပစ္စည်းဖြစ်လိမ့်မည်ရှင်းပါတယ်။ multitasking သည်ကြီးမားသောဖိုင်များနှင့်ပင်လျှင်ချောမွေ့ပြီးအကျိုးရှိစွာလုပ်ဆောင်ရန်အတားအဆီးတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ terminal သို့မဟုတ်မမျှော်လင့်သောပြcrနာများကြောင့်မသင့်တော်သောအပူလွန်ကဲမှုကိုကျွန်ုပ်တို့မေ့လျော့နိုင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများတွင်စမ်းသပ်ပြီးကချောချောမွေ့မွေ့တတ်၏။
Android 7.0 နီးပါးသန့်ရှင်းသော
ငါတို့ကိုအကြိမ်များစွာပြောခဲ့ပြီ။ Androidsis မှာ Android customization layer ကို NO ဟုပြောတယ်။ အတွေ့အကြုံမှရရှိသောစမ်းသပ်မှုများနှင့်အတူသူတို့အစေခံဆုံးသည်အံ့ suffer စရာကောင်းလောက်အောင်လည်ပတ်နေသော operating system ကိုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ စင်ကြယ်သော Android ကိုသုံးသောစမတ်ဖုန်းများကိုတွေ့သောအခါ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်ကြသည်။
ဤကိစ္စတွင် DOOGEE BL 7000 သည် Android ကို ၁၀၀% ထိမထိဘဲမပြီးပါ။ ဒါပေမယ့် အသုံးပြုထားသောစိတ်ကြိုက်အလွှာသည်အလွန်ချောမွေ့သည်။ အကောင်းဆုံးကတော့ဒါ ဒါကြောင့်မှာအားလုံးထိုးဖောက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ငါတို့လိုချင်တဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းကဏ္sectionsများအားလုံးရနိုင်သည်။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းမွန်သောအသွင်အရူံးတစ်ခုကိုလည်းစဉ်းစားသည်။ ဖုန်းတွင် application အများအပြားပါ ၀ င်ခြင်းမရှိ။ ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရပုံမှန်အားဖြင့်ဂူဂဲလ်ကိုရေတွက်ခြင်းမရှိသောအပလီကေးရှင်းများသည်အနှောင့်အယှက်ပေးသည်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာမှတ်ဥာဏ်ရှားပါးတဲ့အခါသမယတွေမှာအများကြီးပိုများတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကသူတို့ကိုဖျက်ပစ်ပြီးသူတို့နေရာယူထားလို့မရဘူးလေ။
ငါတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့။ Notification System တစ်ခုလုံးနှင့် Shortcut Bar သည်မည်သည့်နေရာတွင်ဖြစ်သင့်သည်။ ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သောအရာကိုပြုပြင်ရန်မအောင်မြင်ခြင်းသည် ပို၍ အောင်မြင်မှုပိုဖြစ်သည်။ Android ကိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရန်မရည်ရွယ်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုအပြည့်အ ၀ လေးစားပြီးချီးကျူးထောပနာပြုပါသည်။
ရှင်းနေသည်မှာဓာတ်ပုံအပိုင်းသည်စမတ်ဖုန်းတွင် ပို၍ အရေးကြီးလာသည်။ ဖုန်းမော်ဒယ်တခုခုတခုခုကိုရွေးချယ်တဲ့အခါပြတ်ပြတ်သားသားဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အပိုင်း။ အခုလက်ရှိထုတ်ကုန်အသစ်တွေကကမ်းလှမ်းလာတဲ့ကင်မရာတွေရဲ့အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲမှုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်။
ကင်မရာနှစ်လုံးရွေးချယ်ခြင်းလမ်းကြောင်းသစ်သည်ယခုအခါအပြည့်အ ၀ install လုပ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ဒီမှာဆက်နေရန်ကင်မရာအယူအဆတစ်ခုဟုထင်ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်းဤကင်မရာပုံစံဖြင့်ထုတ်လုပ်သူများ ပို၍ များပြားလာသည်။ AND DOOGEE BL 7000 သည်စျေးကွက်တင်သည့်အရာများမှထွက်ခွာလိုသည် နှင့်၎င်း၏စားသုံးသူ။
ရှေ့ဘက်မှာတော့ရိုးရှင်းတဲ့တစ်ခုတည်းသောမှန်ဘီလူးကင်မရာကိုတွေ့ပါတယ်။ သို့သော်၎င်းသည်“ ပုံမှန်” ကင်မရာဖြစ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ The ရှေ့ကင်မရာတွင် Samsung မှထုတ်လုပ်သော 13 megapixel sensor ရှိသည် ဒါကတကယ်ကောင်းတဲ့အဓိပ္ပါယ်နဲ့ဖမ်းယူနိုင်မှုအရည်အသွေးတွေကိုပေးစွမ်းတယ်။ က အလွန်တိကျသော autofocus နှင့်အတူ ISOCELL မှန်ဘီလူး။ စမတ်ဖုန်းများကိုဒီ terminal ၏စျေးနှုန်းအကွာအဝေးအတွင်းမှာမြင်တွေ့ရသည်။ ၄ င်း၏ပင်မကင်မရာတွင်ပင်ဆင်တူနိုင်သည့်အာရုံခံကိရိယာမရှိပါ။ အဲဒါရှိတယ် 88 ဒီဂရီကျယ်ပြန့်ထောင့်အကွာအဝေး.
selfie အပိုင်းအတွက်အဓိကကင်မရာများထက်အရည်အသွေးနိမ့်ရှေ့ကင်မရာများအသုံးပြုခြင်းထုံးစံသည်ဤကိရိယာနှင့်မည်သို့မပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။ DOOGEE သည် BL 7000 နှင့်တပ်ဆင်ရန်ကတိပြုခဲ့သည် ကျောဘက်နှင့်အရှေ့ပိုင်းတွင်တူညီသော resolution တူညီသည့်ကင်မရာများ။ ၎င်း၏ရှေ့ကင်မရာသည်လက်တွေ့ကျကျအရောင်အဆင်းများနှင့်မည်သည့်ပင်မကင်မရာနှင့်မဆိုထိုက်တန်သည့်အနက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်တို့ကိုအပြည့်အဝဖမ်းယူနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ငါတို့လုပ်နိုင်တယ် "မျက်နှာအလှတရား" mode ကို အသားအရေသို့မဟုတ်အသားအရေများကိုပျော့ပြောင်းစေရန်။
နောက်ဘက်ကင်မရာကိုပါသွားကြည့်ရအောင် DOOGEE သည် Samsung ကို BL 7000 အားဓာတ်ပုံအပိုင်းကဏ္toတွင်ပေးမည်ဟုယုံကြည်နေသည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ် ဦး ၏ပြော၏ 13 megapixels တစ်ခုစီရှိ Samsung ISOCELL အာရုံခံကိရိယာနှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ထားသော dual lens။ အရည်အသွေး နှစ်ခုထိုကဲ့သို့သောအစွမ်းထက်ကင်မရာများ၏ပေါင်းစပ်ရလဒ်အတွက်ပြသထားတယ် ဓာတ်ပုံများ၏။
ရှေ့နှင့်ရှေ့ကင်မရာအပလီကေးရှင်းတွင်၊ အလိုအလျှောက်နှင့်လက်စွဲချိန်ညှိအမျိုးမျိုး၏။ နောက်ကင်မရာတွင်ရှိသည့်အပြင်၊ အနီးကပ်ရိုက်ချက်များကိုထင်ဟပ်စေရန်ထင်ရှားသောမှုန်ဝါးမှုစနစ်နှင့်အတူ။ ရွေ့လျားနေသော autofocus သည်အလွန်မြန်သည်နှင့်လမ်းလျှောက်နေစဉ်ရိုက်ကူးထားသောဓာတ်ပုံများ၏ရလဒ်သည်အလွန်ကောင်းသည်။
ကောင်းမွန်သောသဘာဝအလင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးနေ၏တည်နေရာကိုအနှောင့်အယှက်မပေးသည့်ဓါတ်ပုံများတွင်ရလဒ်ကောင်းများသည်။ ငါတို့အရင် ပြတ်သားမှုအဆင့်များနှင့်အရောင်များကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များပါရှိသောဓာတ်ပုံများ။ အတိမ်အနက်နှင့်အဖြူချိန်ခွင်လျှာတို့သည်ဖမ်းယူထားသောပုံရိပ်များ၏နူးညံ့မှုကိုလည်းထင်ရှားစေသည်။ အလိုအလျောက် mode မှာ setting များကိုအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ဖမ်းယူသောအလွန်မြင့်မားသောအဆင့်ကိုရောက်ရှိရန်။
ဒီဓာတ်ပုံမှာအခက်အခဲတွေကအဆောက်အအုံကိုပုံထဲကိုအပြည့်အ ၀ ရောက်ရှိလာစေခြင်းပဲ။ ရိုက်ကူးခြင်းနှင့်ရိုက်ကူးခြင်းတို့သည်အလွန်မြန်သည်။ များပြားလှသောဓာတ်ပုံများတွင်ပင်၎င်းတို့အားလုံးနီးပါးသည်တူညီသောအဓိပ္ပါယ်နှင့်ပြတ်သားမှုရှိသည်။
ဤအခြားရိုက်ချက်တွင်မတူညီသောအလင်းအခြေအနေများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တောက်ပသောရလဒ်ကိုရရှိသည်။ ကျနော်တို့ဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား အလင်းဆန့်ကျင်ငါတို့မြင်တယ် အရောင်များ၏ကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့်ပုံစံများကိုပြီးပြည့်စုံသောဖော်ထုတ်ခြင်းအလွန်မြင့်မားသောအဆင့်မှာရှိပါတယ်။ ဤဖြစ်ရပ်တွင်၊ ဓာတ်ပုံကိုချဲ့လိုက်သောအခါ၎င်းသည်အရည်အသွေးလျော့နည်းသွားပြီး pixel များသည်အလွန်သိသာထင်ရှားသည်။
လည်း DOOGEE BL 7000 ၏နှစ်ဆကင်မရာပါ ၀ င်သည့် Digital zoom ကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်နိုင်ပါပြီ။ ဒီဂျစ်တယ်မှန်ဘီလူးကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံများကဲ့သို့အရည်အသွေးဆုံးရှုံးမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သောပမာဏနှင့်တိုက်ရိုက်အချိုးကျသည်။ သော်ငြားလည်း, အကောင်းဆုံးသဘာဝအလင်းရောင်အခြေအနေများအောက်တွင်ရလဒ်သည်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းမဆိုးပါ.
အမြင့်ဆုံးသော zoom ဖြင့်ကောင်းသောအလင်းရောင်ရှိပုံမှန်ဓာတ်ပုံ။
ကျွန်တော်မြင်သည်အတိုင်း, zoom ကိုအမြင့်ဆုံးအထိတိုးချဲ့ခဲ့သောနောက်ဆုံးဓာတ်ပုံတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်၊ ရလဒ်မကောင်းဘူး။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် optical zoom နှင့်ချဲ့သောအခါဆူညံသံများစွာပေါ်လာသည်။ ဘယ်လိုပုံရိပ်လုံးဝနီးပါး pixelated ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်, အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဓာတ်ပုံ, ဒါကမယုံနိုင်လောက်အောင်ချွန်ထက်ပေမယ့်ကောင်းပါတယ်။
မဆိုသံသယမရှိဘဲ, DOOGEE BL 7000 သည်ဓာတ်ပုံအပိုင်းတွင်အလွန်ကောင်းသောအဆင့်ကိုရရှိသည်။ ၎င်း၏အာရုံခံကိရိယာသည်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံမျှော်မှန်းထားသည်ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ ကိရိယာတစ်ခုကိုကောင်းစွာသက်သေပြနိုင်သောကင်မရာများတပ်ဆင်ခြင်းသည်စိတ်ငြိမ်သက်မှုဖြစ်သည်။ ထိုအမှု၌ Samsung ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ BL 7000 မှာတကယ်ကောင်းတဲ့ကင်မရာတွေရှိတယ်.
ဤကဲ့သို့သောဖုန်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားတဖြည်းဖြည်းနှင့်တရုတ်စမတ်ဖုန်းများနှင့်အတူပါလာသည့်ကင်မရာများ၏clichéကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည်။ ယခုအချိန်၌သူတို့သည်သူတို့လုပ်ဆောင်နေကြသည်။ ပြီးတော့အဲဒါပါ လူကြိုက်များသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များရှိသောဖုန်းများပေါ်တွင်ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းအတွက်ကောင်းမွန်သောမှန်ဘီလူးများကိုတွေ့ရလေ့ရှိသည်.
DOOGEE BL 7000 ရှိအသံသည်အလွန်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သည်
BL 7000 တွင်ပြုလုပ်သောအသံစစ်ဆေးမှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့မြင်တွေ့နိုင်ခဲ့သနည်း စမတ်ဖုန်းစပီကာများပေါ်တွင်လုပ်သောအလုပ်သည်များစွာတိုးတက်လာသည်။ တေးဂီတကိုတီးမှုတ်ခြင်းကျွန်ုပ်တို့သည်တူရိယာတစ်ခုစီ၏အသံတစ်ခုချင်းစီကိုကောင်းစွာသတိပြုမိသည်။ အသံအရည်အသွေးကကောင်းတယ် နှင့်အမြင့်ဆုံးအသံအတိုးအကျယ်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမမှတ်သားလောက်ပုံပျက်လေ့လာတွေ့ရှိနေကြသည်။
အသံသည်ကောင်းသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိသည် DOOGEE ကုမ္ပဏီသည်ဤစက်ကိရိယာကိုနှစ်ဆစပီကာဖြင့်မသုံးထားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းများမှဂီတကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖွင့်ရန်အခြားကိရိယာများကိုများများအသုံးပြုကြသည်မှာမှန်ပါသည်။ ဒါမှမဟုတ်ဒီဟာကိုနားကြပ်တစ်ခုခုသုံးရင်တောင်သူတို့ကအသုံးမပြုဘူး။
ဒါပေမယ့်တောင်မှ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်စတီရီယိုအသံကိုစပီကာတစ်ခုမှပေးသောအသံနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ကြောင်း ဆက်လက်၍ ခုခံကာကွယ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးနှင့်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကိုကြည့်လျှင်အကောင်းဆုံးရလဒ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားကြသည်။ ဒါဟာဒုတိယစပီကာနှင့်အတူအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအများကြီးပိုကောင်းလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်၎င်း၏နိမ့်အစိတ်အပိုင်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်မှထည့်သွင်းပုံရသည်ပေမယ့်အရာ။ အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။
DOOGEE BL 7000 သည်ဘက်ထရီသက်သာသောကြောင့်လား။
ဘက်ထရီကဏ္ is သည် DOOGEE BL 7000 ၏စွမ်းအားအရှိဆုံးသောအရာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်အနည်းဆုံးအားဖြင့်ယခုအရောင်တောက်ပမှုသည်ရွှေရောင်မဟုတ်ပါ။ ကံမကောင်းစွာပဲ ဒီစမတ်ဖုန်းကိုအလွန်စိတ်ပျက်မိတယ်။ မည်သည့်နေရာမှမပို့ပေးနိုင်ဟုကတိပေးထားသော terminal တစ်ခု။ 7060 mAh ဘက်ထရီပါတဲ့စမတ်ဖုန်းတစ်ခုရောက်ရှိလာပါပြီ တစ်နေ့သာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အနည်းငယ်သာ ဒါဟာတစ်ခုခုမှားကြောင်းသေချာနိမိတ်လက္ခဏာကိုဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စမတ်ဖုန်းအစိတ်အပိုင်းများကိုကောင်းမွန်စွာကောင်းမွန်စွာထားခြင်း၏အရေးကြီးပုံကိုအမြဲတမ်းပြောလေ့ရှိသည်။ ပြီးတော့ဒါက devices တွေကိုပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်လုပ်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုကူညီပေးသလဲ။ ဤ DOOGEE BL 7000 တွင်ထိုကဲ့သို့သောဘက်ထရီစွမ်းရည်ရှိခြင်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုအလွန်ညံ့ဖျင်းပါကတစ်စုံတစ်ခုမှားယွင်းနေသည်။ ရုတ်တရက်ဒီစမတ်ဖုန်းကအလေးချိန်မြင့်လာတာနဲ့အမျှအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ဘူး။ အသင်းသည်နံပါတ်များကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သင့်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်တစ်ဝက်ကိုပင်မပေးချေ။
ငါတို့သိသမျှအတိုင်း၊ ဤပြproblemနာ၏အကြောင်းရင်းမှာစနစ်ကိုယ်၌ "bug" ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါကုမ္ပဏီကိုယ်နှိုက်ကတတ်နိုင်သမျှမြန်မြန်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ဒီဖုန်းကကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့အရာအားလုံးကိုကြည့်ပြီးသူတို့အကြွင်းမဲ့ ဦး စားပေးသင့်တဲ့အရာ။ ၎င်းသည် ၀ ယ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ရာတွင်အတားအဆီးဖြစ်နိုင်သည်။ အလေးချိန်နှင့်ဘက်ထရီစွမ်းရည်မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ BL 7000 သည်အပြည့်အဝထောက်ခံသည့် samrtphone ဖြစ်သည်။ မျှော်လင့်သူတို့သည်သူတို့ရှိရာသို့အလျင်အမြန်မဟုတ်နောက်မှ။
DOOGEE BL 7000 Datasheet
ပုံစံ BL ၃.၉
စီပီယူ မာလီ -T860 650 MHz
ဖန်သားပြင် ၅.၅ လက်မ FHD - IPS 5.5 x 1080
ရှေ့ကင်မရာ 13 Mpx အာရုံခံ Samsung ISOCEL
နောက်ကင်မရာ 13 Mpx + 13 Mpx dual ကင်မရာ Samsung ISOCEL အာရုံခံကိရိယာ
ဘက်ထရီ 7060 mAh ဘက်ထရီ
ရှုထောင့် 156 x ကို 76 x ကို 11
ဝယ်ယူရန်လင့်ခ် ဤနေရာတွင် DOOGEE BL 7000 ကိုဝယ်ပါ
DOOGEE BL 7.000 ၏ကောင်းကွက်နှင့်မွမ်းမံနိုင်စွမ်း
ဤစမတ်ဖုန်းကိုစမ်းသပ်ရန်နှင့်အသုံးပြုရန်အချိန်အလုံအလောက်ရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကြံအစည်ကိုရရှိခဲ့သည်။ စမ်းသပ်ပြီးတဲ့သူတွေလိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုအံ့အားသင့်စေမယ့်အရာများ၊ ကောင်းမွန်သောအရာများဟုထင်သောအင်္ဂါရပ်များသာမကတိုးတက်မှုအတွက်နေရာရှိနိုင်သောအချို့ကိုလည်းသတိပြုမိသည်။
ထို့ကြောင့်ပစ္စည်းကိုနေ့စဉ်ပြင်းထန်စွာအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ရရှိသောရလဒ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြားခွဲခြားနိုင်သည် DOOGEE BL 7000 သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောအားသာချက်များ။ ဒါကြောင့် DOOGEEE မှနောက်ဆုံးထွက် "In favor" နှင့် "Against" တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားပါသည်။
DOOGEE BL 7000 ၏မျက်နှာသာအတွက်
သင်၏ကင်မရာများ။ ရှေ့ကင်မရာနှင့်နောက်ကင်မရာနှစ်ခုလုံးမှရရှိသော resolution သည် ပျမ်းမျှလက်ရှိကမ်းလှမ်းသောအရာကိုအထက်။ ဓာတ်ပုံများ၏ရလဒ်သည်မည်မျှကောင်းသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အများအပြားဖမ်းယူနိုင်ခဲ့သည်။ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအရောင်များ, အလွန်ကြီးစွာသောချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အလွန်ကောင်းသောနှင့်အလွန်အောင်မြင်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို။ အချို့ရှိ Samung မှလက်မှတ်ထိုးထားသောကင်မရာများသည်အမြဲတမ်းလုံခြုံသောအလောင်းအစားဖြစ်သည်.
အထွေထွေစစ်ဆင်ရေး။ BL 7000 သည်ကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ပြီးသောနယ်ပယ်အားလုံးတွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အင်တာနက်ရှာဖွေခြင်း၊ တေးဂီတသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဖွင့်ခြင်းနှင့်မည်သည့်ဂိမ်းကိုမဆိုကစားခြင်း။ သင့်ရဲ့အရည်အချင်းပြည့်ဝမှုအတွက်မည်သည့်အတားအဆီးမှမဖြစ်စေခြင်းအပြင်၊ ၎င်းသည်ကပ်ထားခြင်းမရှိပါ၊ အပူမပေးပါကအမြဲတမ်းလျှင်မြန်စွာတုံ့ပြန်သည်။ ၎င်း၏4GB RAM နှင့်၎င်းတို့ပရိုဆက်ဆာနှင့်မည်မျှကောင်းမွန်စွာလက်ထပ်သည်ကိုသိသာသည်။
ကင်မရာများကဏ္တွင်ရှေ့ကင်မရာအကြောင်းအထူးဖော်ပြပါ။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခင်ကအသုံးပြုထားသည့်အရာထက်များစွာပိုမိုမြင့်မားသော resolution ရှိသည်။ ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲဒီ DOOGEE လှုပ်ရှားနေတဲ့အကွာအဝေးအတွင်းမှာစျေးကွက်အတွင်းမှာပိုမိုကျိုးနွံသောအဓိကကင်မရာများပါရှိသည်။ ဒါဟာရှိသည်ဖို့တန်ဖိုးထားသည် ရှေ့ကင်မရာကမှန်ဘီလူးကောင်း။ ထိုအလည်းလာလျှင်အများကြီးပို flash နှင့်အတူလိုက်ပါသွားသည်။ တန်ဖိုးထားဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအသေးစိတ်။
ဖုန်းကိုကာကွယ်ရန်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။ အချို့သောကုမ္ပဏီများသည်စမတ်ဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများအဖုံးများထဲတွင်၎င်းကိုယ်တိုင်အတွက်မည်သို့ပါဝင်သည်ကိုတွေ့ရခြင်းက ၀ မ်းသာစရာပင်။ ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရ၎င်းသည်ဖုန်းဝယ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့ဝယ်သောအရာဖြစ်သည်။ တခါတရံမှာသင့်တော်တဲ့အဖုံးကိုမဝယ်ခင်မှာကျဆုံးခြင်းတောင်တောင်ငါတို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိရိယာအသစ်ကိုဖယ်ရှားပြီး၎င်းအချိန်တွင်ကာကွယ်နိုင်သည်။ BL 7000 သည်သေတ္တာထဲတွင်ထည့်သွင်းထားသည် ဆီလီကွန်အိမ်မှ ပွင့်လင်းနှင့် ဖန်ခွက်ဖန် မျက်နှာပြင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်
ဘက်ထရီမျှဝေခြင်း cable ကို။ ဒီ box ထဲမှာပါ ၀ င်တဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းများထဲမှတစ်ခုကတော့အခြား device တစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ရန် cable ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအရွယ်အစားရှိသောဘက်ထရီကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် အခြားစမတ်ဖုန်းများကိုအားသွင်းရန်ရွေးစရာ သူတို့ဘက်ထရီကုန်သွားတယ်
ဒီဇိုင်းနှင့်ပစ္စည်းများ။ DOOGEE သည်ယခုအချိန်ထိကာယလှပသောစမတ်ဖုန်းများကိုပြုလုပ်နေသည်။ BL 7000 သည်ထင်ရှားသည် တကယ်ကောင်းသောအဆုံးသတ်။ la ၎င်း၏ပစ္စည်းများပေါင်းစပ်တဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ တုပသားရေ terminal ၏နောက်ဖက်သည် metalle frame နှင့် matte tones ဖြစ်သည်။ ကင်မရာရဲ့တည်နေရာနဲ့တည်နေရာကိုလည်းကြိုက်တယ်။
အဆိုပါ DOOGEE BL 7000 ဆန့်ကျင်
ဘက်ထရီကြာချိန်။ ကျနော်တို့ဘက်ထရီသက်တမ်း၏ပြတ်သားတဲ့ပျက်ကွက်ကိုအရာတစ်ခုခုအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပေမယ့်သေချာပေါက်မကြာမီဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ငါတို့ရဲ့စိတ်ပျက်စရာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားရမယ်။ ဘက်ထရီပါသည့်စမတ်ဖုန်းသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၏သုံးပုံတစ်ပုံသို့မရောက်ရှိနိုင်ခြင်းကိုလက်ခံနိုင်ပုံမပေါ်ပါ။ ပြီးတော့အဲဒါကိုမျှဝေနိုင်ဖို့ဆက်စပ်ပစ္စည်းလည်းပါဝင်သည်။ ဤခေါင်းစဉ်သည်မကြာမီအဓိပ္ပါယ်ပျောက်သွားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
လက်ဗွေဖတ်စက်။ ဒါဟာလက်ဗွေဖတ်စက်မကောင်းတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမဟုတ်တော့ပါ။ The ပြဿနာ ပိုပါတယ် တည်နေရာ ပုံရသည် နောက်ကျောတွင်စာဖတ်သူကိုပါ ၀ င်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်တွေ့ရသောဤအရာသည်အိမ်ခလုတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အားလက်၏ကိုယ်ဟန်အနေအထားကိုအနည်းငယ်အတင်းခိုင်းသည်။ မှန်ကန်သောစာဖတ်နိုင်အောင်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုအခြားတစ်ဖက်တွင်ကိုင်ထားရန်ပင်လိုအပ်သည်။
အလေးချိန်။ DOOGEE BL 7000 သည်အရာများစွာအတွက်ထူးခြားသည့် terminal တစ်ခုဖြစ်ပြီးအများစုမှာကောင်းမွန်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အလေးချိန်အလွန်မြင့်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့လျစ်လျူရှု။ မရပါ။ မည်သည့် terminal မဆိုနီးပါးနှစ်ဆပိုများသည်။ ကျနော်တို့က၎င်း၏ကြီးမားသောဘက်ထရီကြောင့်နားလည်သောအရာ။ စမတ်ဖုန်းအလွန်လေးလံပြီးကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကိုပေးသင့်ပါသလား။ အရသာအရောင်များသည်။
အသိပေးချက် LEDs ၏မရှိခြင်း။ ဒါကြောင့်တစ် ဦး လေးနက်ပြစ်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားမရပေမယ့်။ တစ်ခါက Notification LEDs ပါ ၀ င်သောစမတ်ဖုန်းတစ်ခုရှိခဲ့သည်။ သူတို့သူတို့ကိုမရှိတဲ့အခါသူတို့ကိုလွမ်းတယ်။ ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်စရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်တို့ဆိုင်းငံ့ထားသောမည်သည့်သတင်းစကားကိုသူတို့သိသည်။
DOOGEE BL ၇၀၀၀
အသိပေးချက် LEDs ၏မရှိခြင်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » DOOGEE BL7000 ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အားလုံးကောင်းပေမယ့် ... ဘယ်လောက်အလေးချိန်ပါသလဲ